Fanotofana ny Marais masay : Iza no minia tsy manaraka baiko sy lalàna -
AccueilSongandinaFanotofana ny Marais masay : Iza no minia tsy manaraka baiko sy lalàna
Taorian’ny fidinan’ny minisiteram-panjakana misahana ny tetikasan’ny Filoham-pirenena sy ny fanajariana ny tany, dia efa nivoaka ny naoty amin’ny tokony hanalana ireo ranontany nanotofana ny tetsy Marais Masay. Ankehitriny anefa tena hodian’ ireo mpanatanteraka baiko tsy tanterahina izany, ary toa tsy misy manala ny tany. Manoloana izany indrindra amin’izao fotoanan’ny avy orana izao dia miakatra izay tsy izy ny rano eny amin’ny fokontany manodidina, ary io izay efa nitarainan’ny fokontanin’Amboditsiry fatratra ny hanalana ny tany haingana.
Ankehitriny dia mahavariana ny zava- misy, satria tian’ ireo tompon’andraikitra sasany hajariana angamba ny tany, ka dia nambolen’izy ireo. Mipetraka noho izany ny fanontaniana hoe ilay lalàna misy milaza fa izay manamaintimolaly ny tany no manao ny fangatahana ka lasa tompony avy eo. Inona no antony ilazana izany fa tsy ny fisiana fambolena maro isan-karazany eo amin’ io tany totofona io, izany hoe ny lalàna misy mikasika ny fanajariana izay efa mipetraka no tiany hitsahana amin’ ity lalàna misy mikasika ny fananan-tany ity ve. Raha ny hita amin’ny sary eo ambony io dia tsy miala ny fefy, midika izany fa manan-tompo ny tany. Ny fidirana ao amin’ io toerana io tsy nahazoana alalana izany dia tahaka ny hoe mangalatra, na dia tsipihina manokana aza eto fa tanim-panjakana, ary tsy misy tompony velively tompoko ny tany, izay efa napetraky sy voasoritra anatin’ny planin’ny fanajariana ny tanàna aza fa tsy azo totofana.
Marihina aloha fa ny baiko dia efa niainga avy amin’ ny filoham-pirenena ny amin’ny tokony hanajana ny lalàna misy mikasika izay fanajariana ny tany izay, mahalasa eritreritra kosa hoe iza ireo minia tsy mandray baiko ireo. Eto ihany koa dia tsara ny manamarika fa ankoatra ny fanotofana ny tany tsy ara-dalàna izay nataon’ireo olon-tsy fantatra, dia mbola nisy ihany koa ny fanimbana fananam-bahoaka izay nataon’izy ireo, satria nandritra ny fandraisana ny asa vita, dia voamarina ny fisiana aro fanina amin’ ny sisin-dalana iny. Raha ny tazana amin’ ny sary anefa dia tsy eo intsony izany aro fanina izany, ary raha natao aza hoe mba efa nisy ny fanajanonana ny fanotofana, maninona no tsy haverina izany fananam-bahoaka izany.
Manoloana izany indrindra dia miandry ny tompon’andraikitry ny serasera ny mpanao gazety amin’ny fitondrana fanamarihana mikasika io raharaha io, iza no tena nanao ny fanotofana , iza no tsy nandray ny andraikitra izay efa nandraisan’ny minisitra fanapahan-kevitra fa tokony halana ny tany. Fanamarihana farany dia tokony ho fantatry ny rehetra ihany koa hoe iza amin’ izay ilay tena tompon’io hevitra maloto io, ary taiza ny kaominina Antananarivo manoloana izao zava-mitranga izao. Adidin’ ny tompon’andraikitry ny serasera mantsy amin’ny fotoana tahaka izao no mampatsiahy ny minisitra tompon’andraikitra amin’ny vaovao izay tokony homena ny mpanao gazety manoloana ny zava-misy. Noho izany dia tsara ny mampatsiahy fa manana anjara goavana amin’ny fampandrosoana ny serasera, indrindra ireo izay nametrahana andraikitra.